Shiinaha Breathable Custom Oem Fashion Dabaasha Adult Sexy Mens Beach Shorts warshad iyo soo saareyaasha | Dufiest
Neefsashada Custom Oem Fashion Dabaasha Adult Sexy Mens Beach Shorts
cabir: S, M, L, XK, XXL ama cabbirka caadada
Xeebaha xeebtu waa xulasho kulul oo dadka dhexdeeda ah markay ku jiraan safarka xeebta ama guriga oo aan ku iibinayno qiimo jumladle.Waxaan nahay soosaaraha gaarka ah iyo soo-saarka dharka isboortiga ee Shiinaha Waxaan u isticmaalnaa dhar kala duwan sida suufka, acylic, polyester iyo Dumarka hoodie waxaa lagu heli karaa qiimo jumlad ah. Macaamiilku waxay ku iibsan karaan hoodie jumladle tiro aad u tiro badan AT qiimaha tartanka AS isboortiga DUFIEST waa soo saare gaar ah oo ka socda Shiinaha, jumladle, dhoofiyaha iyo warshadda dharka isboortiga, hoodies ， track jackets and bottom, T-shirt, Tank top and fit calim dress. Waxaa loo isticmaali karaa guriga iyo shaqada labadaba Dayrta iyo jiilaalka, oo ah mid aad u jilicsan oo moodada ah.
Loogu talagalay DUFIEST oo laga sameeyay dhalooyinka caaga ah ee dib loo warshadeeyay iyo polyester dib loo warshadeeyay, Life Shorts 2.0 ayaa ah farsamo gaaban oo diyaar u ah wax kasta oo biyo ah ama dhul ku xeel dheer.
Laga soo bilaabo moolka badda illaa barkadda bilaa xad-dhaafka ah, sanduuqa CrossFit illaa fadhiyada dhagxaanta, Life Shorts 2.0 waxaa ka buuxa faa'iidooyin ka dhigaya inay ku raaxeystaan ​​waxqabad kasta.
Iyada oo waaraysaa safka hore ee geedi socodka naqshadeynta, gaagaabadan ayaa loo dhisay inay waaraan isla markaana ay soo ansixiyaan labada cayaartooy ee adduunka ugu fiican iyo kuwa ilaaliya deegaanka.
Markii loo xidho dharka dabbaasha, dogob waxaa badanaa loo yaqaan dogob dabaal ama maydhasho dogob (ama leh ereyga guud ee guud ee dharka lagu maydho ama isku macno ah) caadi ahaanna way ka gaaban yihiin guddiga gaagaaban, kaas oo u fidiya jilbaha Ujeedada koowaad ee shabaqa gudaha labo ka mid ah dogob dabaalan waa in taageero la siiyo xubnaha taranka inta dabaasha. Ku shabaqa isku duubnaadaa xubnaha taranka jirka si qaab la mid ah nigisyada qaabka gaaban. Tani waxay ka celineysaa inay ka baxaan dhibaatada inta ay ku jiraan dhaqdhaqaaqa jirka adigama ahan a guddiga-xidigaha, sabuurad ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu caweeyo xeebta ama barkadda dhexdeeda lagu qasmo. Thanks to jilicsanaanta jilicsan, qalabka jilicsan, iyo naqshadeynta aaminka ah, ragga badankood waxay doorbidaan inay xirtaan dabaasha, halkii caadiga ahayd dabaal dogob.
Waxaa jira sababo badan oo aad u jeclaan karto inaad xirato sabuurad.
Asal ahaan, waxaa loo sameeyay badmaaxayaal, waxayna bixiyaan faa'iidooyin kala duwan oo qiimo leh kuwa mowjadaha fuushan. Mid ka mid ah waxtarka noocan ahi waa miisaanka fudud, qalajinta degdegga ah, walxaha waara ee ay ka samaysan yihiin.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad kaliya qorsheyneyso inaad iibsato lammaane cusub waxaad is weydiin kartaa ma loo isticmaali karaa dharka gaaban dabaasha? Jawaabta oo kooban waa, haa. Noocyada sida O'Neill, Birdwell, Hurley, Quiksilver waxay soo jireen tobanaan sano waxayna ku takhasuseen golayaasha gaagaaban ee ugu wanaagsan biyaha. Maanta waxaan eegi doonaa sababta gaagaaban ee sabuuradda ay ugu fiican yihiin dabaasha iyo waliba howlaha kale ee ka jira ama ka baxa biyaha.
Hore: Ragga Dharka ah ee Gaaban Gaaban Gaaban Gaaban Xeebaha Surwaalka Baaxadda Weyn ee Dabaasha Saraawiisha Qallalan
Xiga: Gawaarida Dabaasha Dharka ee Ragga Dharka ee 2020 Ragga
Ningbo Dufiest Industry. & Ganacsiga Co., Ltd.
Isniinta ilaa Sabtida
WIXII SII BADAN
Weydiimaha ku saabsan alaabtayada ama sheegashada, fadlan noo dhaaf e-maylkaaga waxaanan la xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.